ITOOBIYA OO IYANA CARQALADAYSAY SHIRKA MBAGATI – Warsame Digital Media WDM. "GET USED TO FREE PRESS"
Ismail Warsame December 16, 2019 December 21, 2019 Uncategorized
Laga Soo Wariyey Buugga “HAYAAN”
2002-dii intuu Shirku ka socday Mbagati, waxa soo kordhay Itoobiya oo markay aragtay in Kenya, Jabuuti iyo Masar Shirka kaga awood badateen, iskuday in ay Shirka buburiso si ayen waxba uga soo bixin Mbagati. Itoobiya waxay abaabushay in kooxxa gacansaarka iyada laleh sida Maxamed Saciid Morgan, Maxamed Xabeeb (Maxamed Dheere), Maxamuud Sayid, Yuusuf Direed iyo kuwo kale, Shirka isaga baxaan. Kuwo Maxamed Dheere ayaa Jowhar u kaxaystay. Deedna Morgan, inta Ceelbarde/Bakool aaday ayuu ciidankii Jubaland ee halkaa joogay ku weeraray Kismaayo oo ay haystaan Isbahaysiga Dooxada Jubba. Ergadii Mareexaan ee Shirka waxay u qaateen Cabdulllaahi Yuusuf in uu la ogyahay Morgan weerarka Kismaayo. Taa macnaheedu waa in ergada Mareexaan Madaxweyne u dooran Cabdullaahi Yuusuf. Wasiirka Arrimaha Dibedda Itoobiya, Seyoum Mesfin iyo madaxda ciidanka wardoonkuba lug ayey ku leeyihiin arrintaa. Maxda Jabuuti iyana qas iyo saamayn bay ka dhex-waadeen ergooyinka Shirka. Jabuuti kooxdii Carta ee Cabdulqaasim Salad Xassan ayey wadataa oo ay u olalayneysay..
Masar iyo ururka isutagga carabta (League of Arab States) ayaa iyana u olalaynaya ina Salad Boy (Cabdulqaasim). Waa intaanan ku guuleysan cayradda Kolonso Musoka, Wasiirkii Amuuraha Debedda ee Kenya.
Dhanka kale, Madaxweyne Xigeenka Puntland, Maxamed Cabdi Haashi, ahaana Kusimahii Madaxweynaha Puntland ayaa isna wada isqabad siyaasadeed gudaha golayaasha Puntland, gaar ahaan, isaga iyo Wasiirka Maaliyedda, Cabdirahmaan Faroole, ka waday, iyo in uu dagaal Somaliland geliyo Puntland duleedka Waqooyi ee Laas caano, aaga Ari Cadeeye.
Xassan Abshir Waraabe, Jini Boqor, Xirsi Bulxan, Cali Khaliif Galayr, Maxamed Cabdi Yuusuf, Cali Baashi, Jaamac Cali Jaamac, iyo kuwo kale ayaa iyana xoog uga soo horjeeda Cabdullaahi Yuusuf. Qaarkood waxay wateen Cabdullaahi Cadow/Habar-Gidir/Reer Nimcaale, kuwana Cabdulqaasim Salaad ee Kooxda Carta. Markay arrimaha Shirka Mbagati halkaa marayaan, Cabdullaahi Yuusuf khalkhal siyaasadeed iyo walaac quusu ku jirto baa galay.
Markaan arkay in Cabdullaahi Yuusuf jahawareer galay, ayaan la xiriiray Jananka Kenya ee Maxamuud. Waa wadahalsiiyey. Janan Maxamuud Cabdullaahi Yuusuf wuxu ku yiri: “Cabdullahiyow, ciidna halkaan kaama sadroonee, kaagamana awood badan eh, cagaha dhulka dhig”.
Hadii Maxamed Cabdi Haashi dagaal ka dhex-ridi lahaa Puntland iyo Somaliland, Cabdullaahi Yuusuf ma joogikareen Shirka Mbagati, markaana hubaal bay ahayd in Cabdullaahi Cadow ku guuleysan lahaa madaxnimada Soomaaliya. Hadii dagaalka Morgan ee Kismaayo sii soconlahaa ergada Mareexaan Cabdullaahi cod ma siiyeen. Cabdullaahi Cadow ayaa madaxweyne noqonlahaa. Hadaanan Waftiga Itoobiya ee Shirka Mbagati joogtay anaan dacween si ay joojiyaan carqaladaynta, Shirku waa burburilahaa. Hadaanan ku guuleysan in anu badelo Kolonzo Musoka, Cabdulqaasim Salaad Boy ama Cabdullaahi Cadow ayaa guuleysanlahaa. Hadaanan dhinacayaga kusoo dabaalin Uganda iyo Museveni, Kalonzo Musoka waa naga guuleysanlahaa, wuxuna helilahaa balanqaadkii Sacuudi Carabiya in ay gacan maaliyadeed ku sii doonto doorashadii madaxnimada Kenya ee markaa soo socotay, markuu Shirka Mbagati soo saaro Cabdulqaasim Salad Xassan oo ah Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxda Abgaalku waxay qabaan cudurka “Stockholm Syndrone” ee ku dhacca dadka lahaystayaasha ah, kuwaa oo jacayl u qaada kuwii iyaga haysanjiray. Abgaalku waxay aqoonsi ka raadiyaan Habar-Gidirta, taa oo ka dhalatay dagaalladii kululaa ee ay kala soo galeen Xamar bartamaha Dagaalkii Sokeeye. Waa sababta Cali Mahdi, Xusseen Boot, Suudi Yalaxow iyo Maxamed Dheere dhanka siyaasadda ugu guuldaraysteen markay Habar-Gidir ku sasabatay in Abgaalku yihiin madaxdii Hawiye oo afka baarkiisa ah, deedna daaqadda siyaasadeed ka tureen madaxdii Abgaal oo dhan; waa sababta Cali Mahdi, Xusseen Caydiid Shirkii Qaahira 1997 ugu raacay. Waa sababta Xusseen Boot u raacay Ina Salaad Boy Shirkii Carta 2000. Waa sababta Maxamed Dheere u damcay in uu isu sharaxxo madaxweyne Soomaaliya Shirkii Mbagati. Waa sababta Suudii Yalaxow Cabdullaahi Yuusuf ugu yiri in uu kabo ka weyn gashaday xiligii shirkii Mbagati. Madaxda Habar-Gidir ayaa ku yiri, “idinkaa ahe madaxdii Hawiye, Daarood naga dhiciya.
Maxamed Dheere, oo ahaa Dagaal Ooge Puntland soo kobcisay, hay’addaha sirdoonka Mareykankana ku xirtay dhanka la dagaallanka argagixisada, ayaa inta u bogay dhiiragelinta Habar-Gidir, iyo lacagta an xisaab-cilinta la hayn ee CIA Mareykanka, iskudayey in uu musharaxnimada Cabdullahi Yuusuf kahor yimaado, isagoo Isbahaysiga SRRC kala tirsan. Xubnihii SRRC ayuu bar goostay, lana degay hudheelka Nairobi New Stanley. Habaynkii oo dhan Maxamed iyo goosankiisu waa la qayilayey, maalintiina waa la hurdaa, macaa dumarkii shirka nooga olalaynayey. Waxay noqotay in Maxamed Dheere iyo CIA Mareykanka kala reebo, ilaa Maxamed Dheere hudheelkii New Stanley kharashkiisa loo qabsado, bal in uu madaxweyne isu sharaxxo iskaba daa eh.
“Buuggani waa mid xiisabadan oo Soomaalidu saf u gelidoonto”, Qore: Ismaaciil X. Warsame
Previous XIIN FINIIN, SAYIDKA IYO FADUMA
Next HAYAAN, SAFARKII DHEERAA EE WIILKA REER MIYIGA